Waa kuma Taliye xigeenka cusub ee ciidanka booliska Jamhuuriyada Somaliland – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Waa kuma Taliye xigeenka cusub ee ciidanka booliska Jamhuuriyada Somaliland
Allhadaaftimo November 6, 2019 November 7, 2019 Uncategorized
Waa kuma Taliye xigeenka cusub ee ciidanka booliska Jamhuuriyada Somaliland ee madaxwayne Biixi magacabay. Waxa madaxa waynaha Somaliland uu maalintii salaasada ee bishu ahayd 5th Nov 2019 uu magacaabay taliye iyo taliye xigeen ciidanka booliska uu yeelan doono ka dib markii uu geeriyooday tayihii ciidanka booliska taliye xigeenkiina xanuunsaday. Haddab waxaynu ku eegayna taariikh nololeedka taliye xigeenka ciidanka booliska loo magacaabay.
Cabdi Xasan Mirre Faarax wuxuu ku dhashay magaalada Hargeisas 21st Nov 1955, wuxuu tacliintiisa bilaabay sanadkii 1966kii wuxuna dugsiga hoose dhexe iyo sareba ku soo qaatay dugsigii Police Boys Brigade ee mandheera. Wuxuu ciidanka booliska ku biiray sanadkii 1970 (Somalia ).
Muddadii shaqada ku jiray wuxuu bartay waxa ka mid ah :-
2005 wuxuu bartay Crime Scene Management oo ay bixisay Metropolitan police of London specialist crime directorate .
2006 wuxuu bartay Serious crime investigation oo ay bixinaysay Metropolitan police of London
2007 wuxuu baray Leadership, Command and management skills oo uu ku qaatay dalka gudihiisa bixisayna UNDP.
2009 wuxuu bartay Somaliland Police Leadership program oo uu ku qaatay dalka Ethiopia waxana bixinasay National Policing improvement agency (NPIA) oo ka tirsan International Academy Bram shill .
2012 wuxuu bartay International cooperative in the investigation and prosecution of offences committed at sea. Oo uu ku qaatay dalka Uganda.
2013 wuxu dalka UK magalada London ku bartay Terrorist finance investigation
2014 wuxuu dalka UK magalada London ku qaatay course : Firearms commander
2014 wuxuu dalka Ethiopia ku qaatay Commander Leadership Oo bixinaysay (JCTTAT) UK
2017 wuxuu bartay C.I.D training oo bixinaysay European Union (EU)
Wuxuu noqoday qaybta ciidanka ee isgaadhsiinta ‘telecommunication’
1981 wuxuu ka mid noqoday ciidanka booliska ee danbi baadhista C.I.D. Xamar gobalka SHabeelada hoose, kismaayo iyo Marka.
1991 wuxuu ka mid aha ciidankii booliska Somaliland lagu aasaasay wuxuuna saldhiga dhexe Hargeisa ka noqday danbi baadhe
1994 wuxuu ka mid noqoday ciidanka booliska ee qaybta danbi baadhista C.I.D
1997 waxa loo magacaabay la taliyaha dhinaca sharciga ee D/hoose Hargeysa
2000 waxa loo magacaabay taliye xigeenka 2aad qaybta booliska gobalka saaxil (Berbera).
Previous Guddoomiye ku Xigeenkii Arrimaha Bulshada Sh/Hoose oo lagu dilay Hoygiisa
Next Guddoomiye ku xigeenka Barlamaanka Puntland oo xaqiijiyay in uu qabtay mooshin ka dhan ah guddoomiyaha